Gebze Darıca Metro bu n’obi imeghe na Septemba 2023 | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliGebze Darıca Metro bu n’obi imeghe na Septemba 2023
22 / 05 / 2020 41 Kocaeli, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
A na-ezube gebze imeghe ụzọ ya ụzọ n'ime Septemba
Union of Municipality of Marmara na Kocaeli Obodo Ime Obodo Assoc. Dr. Tahir Büyükakın nyochara ọrụ ọrụ nke Gebze-Darıca Metro Line, nke e bufere na Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, mita 52 n'okpuru ala. Ọrụ nke ụzọ ụgbọ oloko a, nke Kocaeli Obodo ukwu tụkwasara ntọala ya ma mesịa buru ya na minista Mịnịstrị na akụrụngwa na mbido nke Mayor Büyükakın, na-aga n'ihu n'ụzọ ọkụ. Mayor Büyükakın, onye kwuru nkwupụta 52 mita n'okpuru ala site na ịga n'okporo ụzọ ndị dị na mpaghara ga-abụ Gebze Central Station, kwuru, "Enwere ọrụ dị ebube ebe a. Enwere otu na-aga n’ihu na-arụ ọrụ ehihie na abalị. A ga-arụzi ụlọ ndị a ga-emi n'ọwara a. Ọgwụgwụ June.
Anyị ji ohere ahụ nwee ọganihu dị ọsọ ọsọ ”
Gebze Mayor Zinnur Büyükgöz, Onye isi oche AK Party District İrfan Ayar, onye isi obodo ukwu nke Minista Alakụba Mustafa Altay na ndị ọrụ aka nke ụlọ ọrụ nkwekọrịta, bụ ndị na-arụ ọrụ ahụ, nọkwa na nyocha ahụ. Ọ sịrị, "A na-arụ ọrụ ọwara ahụ," ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-aga n’ihu ngwa ngwa. Ọ ga-amasị m ikele onye ọ bụla nyere aka. Ọ ga-amasị m ikele Onye isi ala anyị Recep Tayyip Erdoğan nnukwu ekele m. Site na nkwado ha, anyị enweela ike ịrụ ọrụ a ọsọ ọsọ. Site na Mịnịstrị nke loadinggbọ njem na-ebugharị ọrụ ahụ, anyị nwere ohere iji nwee ọganihu ngwa ngwa. N'ụzọ dị otu a, anyị ga-arụchazịzịrịị ọdọ ụgbọ a n'ime oge a. ”
“E nwere ezigbo ọmarịcha ihe osise.”
Onye isi obodo nke Kocaeli Metropolitan Munso Assoc bụ onye zigakwara ozi na OSB-Gebze-Darıca Metro Line ga-abụ 15.4 KM ogologo ma nwee ụlọ 11. Dr Tahir Büyükakın kwuru, "Ọ gbadaala mita 52. A na-arụ ụlọ ọwa na ọdụ. Nke a bụ onyoonyo mara mma nke ukwuu na anyị ji nganga na obi ụtọ. Ihe omimi a na-aga n’ihu n’otu uzo uzo ato ozo n’ariri oru ososo. Site n'ikike nke Allah, a ga-arụzu ọrụ a n'oge ezubere. Anyi kele Onye isi ala anyi ozo. Site n'enyemaka nke oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Transportgbọ njem anyị, site n'ikike nke Allah, anyị emepeela ihe owuwu Metro anyị maka ọrụ nke ụmụ amaala anyị bi na mpaghara a. ”
“ANY PL NA-AKW THEKWỌ NSỌ NA METRO AKA N'INBARA September 2023”
Onye isi ala Büyükakın kwuru, "A na-ahụta ọrụ a dịka ọrụ nke nwere njem na njem njem ọha na eze n'etiti Darica Gebze na mpaghara nhazi, mana ọ bụ nnukwu akụrụngwa na-ejikọ obodo abụọ." OIZ anyị na Gebze na Marmaray Anyị ejikọla na akụrụngwa niile dị na Istanbul. " N’ikwu na ụlọ ọrụ nkwekọrịta ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, Mayor Büyükakün kwuru, “Ọ ga-amasị m ikele ndị enyi anyị niile na-arụ ọrụ ehihie na abalị na saịtị a yana Nnukwu Generallọ Akụ nke Ministrylọ Ọrụ Maka Transportgbọ njem na akụrụngwa. Ọ ga-amasị m ikele ndị anyị bi na Gebze maka ndidi na nghọta ha. Na olile anya, oburu na enweghi ogbaaghara, anyi n’acho imecha oru metro anyi n’ime onwa Septemba 2023 dika usoro oru atumatu ezubere. N'ihi coronavirus, n'ezie, site na ilekọta anya n'etiti ọha mmadụ, na-ewere usoro ndị dị mkpa n'ihe metụtara ahụike na nchekwa, ọrụ ahụ na-aga n'ihu. "
“NA-AKW OKWỌ AKA NA-AGBARA AJURJ ON ỌBARA N’AKA ANYA”
Onye isi obodo Büyükak oncen kwusiri ike ugboro ugboro "A na-atụ anya na a ga-etinye ọrụ a na Gebze na Septemba nke 2023". Ha ga-ebuga Sabiha Gökçen na ụzọ ụgbọ oloko. Anyị ga-esikwa ebe a mepụta akara Sabiha Gökçen. Ministri nke Transportgbọ njem anyị gara n'ihu na mkparịta ụka ya na nke a. N'ihi na ọ bụ ọrụ usoro metro ọzọ. Anyị nwekwara ọmụmụ maka usoro metro nke jikọtara mpaghara Derince, Izmit na Kartepe n'etiti ọdụ ụgbọ elu Cengiz Topel na mpaghara Körfez anyị. ”
Nkpọku sitere n'aka President Karabacak gaa na Ememe Ntucha nke Darıca-Gebze Metro
Ọkwa maka ịre ahịa: Nnyocha nyocha maka Gebze North-Gebze Railway-Darica Light Rail Line…
Gebze North - Ebe Gebze - Darıca Light Rail Line Project Preasi Vasiasi…
Gebze North - Ebe Gebze - Darıca Light Rail Line Project Boğaziçi Project…
Gebze North - Ebe Gebze - ıgbọ oloko na-acha ọkụ na Darıca Light Rail Line…
Ejiri Na 2018 nyochaa Mbụ nke Gebze Metro Line
A ga-etinye akwa mmiri Çanakkale na 2023, ga-abụ mita 2023
Nzọụkwụ mbụ maka ụzọ ụgbọ ala Gebze-Darıca dị na 2018
E webatara Gebze-Darica Metro maka nnukwu ọrụ na Kocaeli History
Gebze Darica Metro Supervision Engineering na Consultancy Services Nweta Nsonaazụ
Nkwupụta obi ike: Gebze Darica Metro Supervision Engineering Consultancy Service
Ozi ezighi ezi banyere Gebze-Darica Metro
Gebze-Darica Metro, ruo n'etiti Kocaeli!
Ọnye na-bụ Abdülmecid Efendi?
Nlere asambodo ọrụ aka bidoro dịka nke taa
Dabere na akụkọ ahụ na-agbasa, Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu pịa bọtịnụ iji mee ka usoro nro dị ngwa na Kanal Istanbul, ka a ga-ehiwe obodo dị n'akụkụ abụọ nke ọwa ahụ. [More ...]
Ego ndị Gebze Metro ga-enweta, ọ bụ ndị Minista?
Gebze-Darıca-Çayıova uzo usoro nkwadebe
Ejiri Nwepu ụzọ ntụgharị Gebze